EU to reject Mugabe's ambassadors-A +APublished 15 October 2010Tags common foreign policy, EEAS, Mugabe, Sanctions, Zimbabwe
A consensus is emerging among the EU institutions to reject Zimbabwe President Robert Mugabe's ambassadors-designate to the European Union, after the country's prime minister, Morgan Tsvangirai, called on the bloc not to recognise Mugabe's unilateral appointment. President Mugabe appointed Zimbabwe's new envoys to the EU, Italy, Sweden, Switzerland, South Africa and the UN without consulting Tsvangirai – prime minister since January 2009 and leader of the opposition Movement for Democratic Change (MDC) party.
Positions: In a letter sent to European Commission President José Manuel Barroso and Council President Herman Van Rompuy, UK MEP Geoffrey Van Orden (European Conservatives and Reformists) urged the two to refuse the credentials of Robert Mugabe's proposed ambassador to the Union.
''I would therefore urge you both to send a clear signal to Mr Mugabe and his supporters that the EU will not tolerate such blatant disregard for due constitutional process and refuse to accept Mrs Muchada's credentials as Zimbabwean Ambassador to the EU,'' he concluded. External Links Political PartiesConservatives in the European Parliament: EU urged to reject Mugabe's 'man in Brussels' Press articlesAFP:EU says Zimbabwe ambassador row is 'serious matter'Français
Mugabe: On power since 1980 Background: Robert Mugabe has been president of Zimbabwe since 1980.
It is estimated that the Mugabe regime is responsible for the death of hundreds of thousands of Zimbabweans. More on this topicNewsEU to treat Belarus dictator 'Mugabe-style'More in this section EU blamed for mishandling Ukraine trade pact agreement